Kuita mboro kurutsa | Noti Katsi
Kuita mboro kurutsa
Laura Torres chinobata mufananidzo | | Updated on 29/11/2019 09:57 | Tricks
Kitsi dzedu dzinodiwa dzinoda kuziva kuti dzimwe nguva dzinogona kuisa chimwe chinhu mumuromo chadzo chisina kukodzera zvachose kwavari. Vanogona kumedza chero chinhu chavanowana chinonakidza kuravira, kana nekukanganiswa nekutamba "kuvhima".
Ehezve, hazvisi zvese zvinhu kana zvinhu izvo vedu vanowana vanowana hazvidyike uye kune zvimwe zvinototyisa. Chii chatingaite kana izvi zvikaitika?
1 Chii chinonzi kurutsa?
1.1 Ndinoziva sei kuti katsi yangu inosvotwa?
2 Ndeipi isingafanirwe kuita kati kurutsa?
3 Ndeipi kuita katsi kurutsa?
3.1 Kuita katsi kurutsa?
4 Zvirimwa zvine chepfu kumakati
4.1 Mukati mezvirimwa
4.2 Zvirimwa zvebindu
Chii chinonzi kurutsa?
Chekutanga pane zvese, ndinofunga zvakakosha kuti tizive chinonzi kurutsa uye nei tichifanira kuenda kuna chiremba. Kurutsa ndiko kudzinga kwemukati mechidya kuburikidza nemuromo. Uchagara uine kusvotwa, kudzokororazve uye unozoita nesimba remudumbu kuti ugone kuburitsa yakanyanya gastric zvemukati.
Kana uchikahadzika, chinhu chake ndechekuti unosheedza nzvimbo yezvipfuyo yaunowanzoenda. Muudze kuti nyaya yacho ndeyei kuti akwanise kuongorora kukomba kwemamiriro acho ezvinhu.
Pano ndinobatanidza zvimwe mamiriro ezvinhu aunofanirwa kutora katsi yako kuenda kunzvimbo yezvipfuyo kana ichirutsa:
Mumakiti ari pasi pegore rimwe zera.
Kana iwe uchifungidzira kuti wakamwa mishonga yemunhu kana chinhu chine chepfu (snail poison, rodenticides, nezvimwewo)
Kana zvichinyumwa kuti kune mutumbi wakadyiwa, senge tambo, shinda, tsono, nezvimwe.
Kana iwe uchirutsa kazhinji kazhinji kana kurutsa kunoramba kuripo.
Kana mumarutsi isu tinowana zvine bilious zvemukati, ropa kana chimwe chinhu chakafanana ne "kofi nzvimbo".
Kana mukati mezuva unorutsa kanodarika 2-3 nguva.
Ndinoziva sei kuti katsi yangu inosvotwa?
Shamwari dzedu dzine nzira isinganzwisisike yekuratidza kusvotwa. Sekutanga chiratidzo vanogona kurega kudya here. Dzimwe nguva ichave yakafanana ne kudonhedza zvishoma uye kuda kufamba nerurimi, sekunge uchinanzva zvisaririra zvekudya kubva mumuromo make.
Izvo zvakanaka ndezvechokwadi, kuenda kun'anga, asi kana tichigara kure nekiriniki zvakakosha kuti tizive nzira yekuita kuti kati irutse uye kuti ndeipi isiri yekukurudzira.
Ndeipi isingafanirwe kuita kati kurutsa?
Kunyangwe tikazviona zvakashata zvakadii, isu hatifanire kukumbira kurutsa chero zvodii kana wakamedza chlorine, peturu, kana chero chigadzirwa chinoshandiswa kugadzirisa mota kana kuchenesa imba. Ndokunge, chero chigadzirwa chinokuvadza. Chikonzero ndechekuti nekumedza iyo mhuka yakatokuvadza uye kana tikakurudzira, kukuvadzwa kweguroku kunowedzerwa nekubatana nekukanganisa nemuto une asidi mudumbu. Izvo zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti hapana zvisaririra pasi.
Uyewo, Kana anopfuura maawa maviri apfuura kubva mhuka yakamedza chigadzirwa chine chepfu kana chinhu chekunze, kurutsa hakugone kukonzerwa. Izvi zvinodaro nekuti mushure memaawa maviri inenge yapfuura ichienda muura hudiki uye kana iri nyaya yezvinhu zvine chepfu, chikamu chinenge chakatorwa nacho. Mune ino kesi zvinokurumidza uye zvakakosha kuti iwe uende kunzvimbo yepedyo yezvipfuyo yauinayo.
Mazimbe anomiswa anogona kupihwa kuitira kuti isabatwe nehuturu. Mazimbe akagadziriswa anogona kuwanikwa mune chero chemishonga pasina kudikanwa kwevechiremba pre-kunyoreswa. Isu tinoshandisa anenge 4-5 mapiritsi eakaomeswa kabhoni akasanganiswa nemvura shoma, kune kati ingangoita 3-4 kg.
Imwe nyaya umo kati haigone kuitwa kurutsa ndeye kana iyo mhuka isingazive nekuda kwenjodzi yekuda kuzarirwa.
Asphyxia nekushuvira kunoenderana nekuti kana iyo mhuka isinga zive kana iine chinhu chinotadzisa mafambiro emhepo uye zvemukati zvemukati zvinogona kupfuura kumapapu nekuti epiglottis inovhara chikamu kana kusingaivhare.
Ndeipi kuita katsi kurutsa?
Hazvisi zvese zvinodyiwa neshamwari yedu ina-makumbo zvine njodzi kwaari. Asi isu tinofanirwa kuramba takamutarisa kana tichifungidzira kuti adya chimwe chinhu chaanofanirwa kunge asina. Tora hanya zvakanyanya nemhepo yekumba freshenersNguva zhinji isu tinosarudza hwema hwekutapira iwo kwavari "unofadza". Makwenzi kana zvirimwa zvakarapwa nemishonga yesora.
Kuita katsi kurutsa?
Ehe saizvozvo, Kurutsa kunozoitwa kana zvichiratidzwa nachiremba wemhuka.
Kumba tinogona kukurudzira kurutsa nehydrogen peroxide ye3% kuchena. Iwe unozopihwa 5ml ye3% hydrogen peroxide, inoenzana nepasipuni yekofi. Isu kumba hatizopa zvakawanda nekuti zvinogona kukuvadza mhuka nekushaya dzidziso yakakwana kana nzira. Izvo zvakakosha kuti mushure mekupa iyo hydrogen peroxide dilution tinoita kuti mhuka ifambe kuitira kuti inyatso shanda.
Kana katsi yangorutsa, marasha akasimudzwa anozopihwa muyero yataurwa pamusoro apa.
Imwe yemamiriro akakura atinofunga nezvekuita kuti kati irutse ndeyekuti yakadya mimwe yemiti yatinayo kumba. Tevere, ini ndinokusiira iwe runyorwa rwezvirimwa izvo isu zvatinowanzo kuve nazvo mudzimba medu uye mapindu uye ayo ane chepfu kukati.
Zvirimwa zvine chepfu kumakati
Kana iwe ukafungisisa izvi zvirimwa, iwe uchachengetera kati yako nguva yakaipa uye tinogona kukudzivirira iwe kubva mukuita kuti katsi yako irutse.
Kasitoma mafuta chirimwa (Ricinus)
Krisimasi Cherry (Solanum)
Cyclamen kana persian violet
Dhiyabhorosi ivy, Poto (Epipremmun aereum)
Ornithogalum (kubva kumhuri yehyacinth)
Poinsenttia kana poinsettia (Euphorbia)
Abrus precatorius kana American licorice
Aesculus (Bhiza Chestnut kana Nhema Chestnut)
Agrostemma githago (candelaria kana carnation)
Juniperus sabina (zvinokambaira juniper)
Alstroemeria (ruva rePeru)
Anemone (musango anemone)
Lantana (mureza weSpain)
Hwamanda yeNgirozi (Brugmansia)
Ngirozi Mapapiro (Caladium)
Muapurikoti muti (Prunus armeniaca)
Ruva remupata (Convallaria majalis)
Arisaema (cobra maruva)
Arum (ZVINONYANYA KUKOSHA)
Kutapira (Persea americana)
Lupinus (lupine kana lupine)
Lycopersicon (mbatatisi, tomato)
Shiri kana ruva reparadhiso (Strelitzia)
Lysichiton (Skunk kabichi)
Nhema-eyed Susana (Thunbergia)
Dianthus (Tagetes, kuchema kweMoor)
Melia (Mahogany Mhuri)
Mirabilis jalapa (Don Diego husiku)
Brugmansia (Hwamanda yeNgirozi)
Kupisa Gwenzi (Dictamnus)
Oak kana holm oak (Quercus)
Centaurea cyanus (cornflower kana bhuruu)
Cestrum (yakasimba usiku)
Colchicum (matsutso crocus kana safironi)
Convallaria majalis (ruva remupata)
Kutema nhema (Agrostemma githago)
Chibage (Centaurea cyanus)
Prunus armenica (apricot muti)
Cotoneaster (yakafanana neminzwa yemoto)
Prunus laurocerasus (cherry muchengeti)
Robinia (nhema acacia)
Dicentra (kubuda ropa moyo)
Rubha chirimwa (ficus)
Dictamnus (gypsy mishonga)
Digitalis (digitalis kana foxglove)
Echium (dendere renyoka)
Schefflera (amburera muti)
Don Diego husiku
Chisimbiso chaSoromoni (Polygonatum)
Frangula kana hazelnut (Rhamnus)
Strelitzia (shiri kana ruva reparadhiso)
Gloriosa superba (mureza weSpain)
Helleborus (Kisimusi yakasimuka, green hellebore)
Nguo yaKristu (Datura)
Tuhja (Yako, cypress)
Thunbergia (maziso matema)
Heracleum mantegazzianum (hofori parsley)
Hippeastrum (Knight's Nyeredzi Lily)
Bhiza Chestnut (Aesculus)
Visum (chena mistletoe)
Ndinovimba wakafarira ichi chinyorwa uye chinokubatsira iwe. Uye yeuka kuti ichi chinyorwa chinyorwa chinodzidzisa, asi uyo anogona kunyatso kubatsira katsi yako ndiye chiremba wemhuka, saka kana iwe uine chero mibvunzo, enda kunzvimbo yako yaunovimba yemhuka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Tricks » Kuita mboro kurutsa
Zvakavanzika zvekatsi nzeve